တိုက်ကြက် သမိုင်းမှာ လောင်းကြေး ဒေါ်လာ တစ်သန်းကျော် စံချိန်တင် အနိုင်ရသွားတဲ့ ကျောက်စိမ်း – WunYan
တိုက်ကြက် သမိုင်းမှာ လောင်းကြေး ဒေါ်လာ တစ်သန်းကျော် စံချိန်တင် အနိုင်ရသွားတဲ့ ကျောက်စိမ်း
whuk-46651 | February 21, 2018 | International News | No Comments
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ချင်းမိုင်မြို့ နယ်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကြက်တိုက် ဗိုလ်လုပွဲမှာ ကျောက်စိမ်း ခီရီ တိုက်ကြက်ဟာ ကြယ်ငါးပွင့် အမည်နဲ့ ကျော်ကြားနေတဲ့ ဆိုက် ကြက် ချန်ပီရန်ကို အနိုင်ရသွားလို့ လောင်းကြေးဆုငွေ ဘတ်ငွေ ၃၃ သန်း ၇ သိန်း ရသွားခဲ့ပါတယ်။
Amazing cook fighting in Thailand win 33,700,000 baht Stunned on February 18th The battle of the history of the war. The Gamecat Championship between the five Star Farm Swan with Gosling Farm Jagger, which isabloody battle of the industry that it is. The prize money in this competition isahuge value of 33,700,000 baht for the results of the Jok Kei Farm Jagiri won this time February
တိုကျကွကျ သမိုငျးမှာ လောငျးကွေး ဒျေါလာ တဈသနျးကြျော စံခြိနျတငျ အနိုငျရသှားတဲ့ ကြောကျစိမျး
ဖဖေျောဝါရီလ ၁၈ ရကျနေ့ ထိုငျးနိုငျငံမွောကျပိုငျး ခငျြးမိုငျမွို့ နယျမှာ ကငျြးပခဲ့တဲ့ နိုငျငံလုံးဆိုငျရာ ကွကျတိုကျ ဗိုလျလုပှဲမှာ ကြောကျစိမျး ခီရီ တိုကျကွကျဟာ ကွယျငါးပှငျ့ အမညျနဲ့ ကြျောကွားနတေဲ့ ဆိုကျ ကွကျ ခနျြပီရနျကို အနိုငျရသှားလို့ လောငျးကွေးဆုငှေ ဘတျငှေ ၃၃ သနျး ရ သိနျး ရသှားခဲ့ပါတယျ။
Tags:ထိုင်း, ကြက်, နိုင်ငံတကာသတင်း
ဗုဒ္ဓဆင်းထုတော် တစ်ဆူကနေ မျက်ရည်လိုစီးကြောင်းများ ကျဆင်း
ရထားဘူတာမှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားခံရတဲ့ ကလေးမလေး
ဟင်းရွက်ရောင်းပြီး မိသားစုကို ထောက်ပံ့နေရသည့် သနားစဖွယ် ၈ နှစ်သားကလေး